लकडाउनमा एक चौथाइको रोजगारी कटौती, कुन-कुन क्षेत्रकाले गुमाए राेजगारी? – AayoMail
लकडाउनमा एक चौथाइको रोजगारी कटौती, कुन-कुन क्षेत्रकाले गुमाए राेजगारी?
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन २१ गते २०:२०
सरकारले एक सय २० दिन गरेको लकडाउन अवधिमा एक चौथाइले रोजगारी गुमाएको पाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ अनुसार उद्योग/व्यवसायले झण्डै एक चौथाइ कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । यसरी कटौती हुने मध्ये अस्थायी/करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ती उद्योग/व्यवसायले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती गरेका हुन्। कटौती भएकामध्ये अस्थायी/करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरै रहेका छन्। होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको देखिएको छ। ‘सो अवधिमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारहरुले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
लकडाउनम उद्योग/व्यवसायले औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेको पाइएको छ । तलब कटौती गर्नेमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडि छन्। यस्तै, ठूला उद्योग/व्यवसायहरुले अन्यको तुलनामा धेरैतलब कटौती गरेको देखिएको छ।
सोही अवधिमा उद्योग/व्यवसायहरुले औसतमा १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको पाइएको छ। लकडाउन अवधिमा ९६.७ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुको उत्पादन/कारोबार ७३.८० प्रतिशतले घटेको पाइएको छ।
लकडाउनमा उद्योग/व्यवसायमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको जनाएका छन्।
सहभागीमध्ये ०.९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुको उत्पादन/कारोबार १५.४ प्रतिशतले बढेको र २.४ प्रतिशतको उत्पादन/कारोबार पूर्ववत रहेको देखिएको छ।
लकडाउनमा ४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेका, ३५ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द रहेका पाइएका छन्।
उद्योग/व्यवसायले बन्दाबन्दीपश्चात् सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब ९ महिना लाग्ने बताएका छन्। होटल तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना लाग्ने देखिएको छ।
८२.३ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायले लकडाउन पश्चात् अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने देखिएको भएतापनि केहीले व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेको समेत देखिएको छ।
उद्योग/व्यवसायहरुमध्ये करिब २० प्रतिशतले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारको ब्याज छुट प्राप्त गरेको बताएका छन्।
६९.९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी/कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रुपमा निरन्तरता दिन सक्ने बताएका छन्।